Pendant fonon-tànana amin'ny ady totohondry - Popular Jewelry
Ity lokanga voahaingo ity dia mampiseho fonon-tanana miady amin'ny ady totohondry. Ny soratra ao amin'ny ankavanan-tanana havia dia mivaky toy izao: "ARY-TRANON'ANDRO FAMPIANARANA NY INC." ho fankalazana ny fifaninanana amboara NY Golden Gloves (orona mandriaka, hatsemboka, hodi-maso mivolombola ary nify tsy tafiditra.)
Vatosoa sarobidy: Volafotsy vy (925), volamena Karat 10, Karat Gold 14 ary volamena Karat 18
Hita amin'ny loko isan-karazany - mifandray aminay.
Vatosoa tsy misy fangarony: Zirconia Cubic
Vatosoa boribory azo ovaina
Mifandraisa aminay noho teny nalaina manokana miaraka amin'ny diamondra.
Size: 51mm (avo w / voaroaka tafiditra)
Toerana: Misc Silver sy Gold
Volafotsy Sterling (925)10K volamena (417)14K volamena (585)18K volamena (750) Logam sarobidy:
Kubika Zirconia (Fotsy)Zirconia goba (Mena) Vidy sarobidy:
Sterling Silver (925) / Rose / Cubic Zirconia (White) - $ 571.19Sterling Silver (925) / White / Cubic Zirconia (Mena) - $ 571.19Sterling Silver (925) / Yellow / Cubic Zirconia (White) - $ 571.1910K Gold (417) / Rose / Circic Zirconia (Fotsy) - $ 1,979.9910K Gold (417) / White / Cubic Zirconia (White) - $ 1,979.9910K Gold (417) / Yellow / Cubic Zirconia (White) - $ 1,979.9914K Gold (585) / Rose / Circic Zirconia (Fotsy) - $ 2,789.9914K Gold (585) / White / Cubic Zirconia (White) - $ 2,789.9914K Gold (585) / Yellow / Cubic Zirconia (White) - $ 2,789.9918K Gold (750) / Rose / Circic Zirconia (Fotsy) - $ 3,166.7918K Gold (750) / White / Cubic Zirconia (White) - $ 3,166.7918K Gold (750) / Yellow / Cubic Zirconia (White) - $ 3,166.79 Variant:
Mahafinaritra ny ady totohondry toa ny pendant Golden Glove tany am-boalohany
Rashard Graham (Houston, Etazonia)
Ity orinasa ity dia tsara serivisy fanaterana tena tsara ny serivisy mpanjifa. I Kevin no lehilahy 💯
Mpisolovava Katrina (Commack, Etazonia)
Faly be amin'ny vokatra sy serivisy
thomas resha (Las Vegas, Etazonia)
haingana ny fandefasana ary vita tsara ny entana ary toa tena mitovy amin'ny tena fifanarahana. Mety hanao raharaham-barotra indray ve ianao?
Arthur Kramer (Tobyhanna, Etazonia)
Faly be aho tamin'ny entana novidiko tamin'ny orinasanao. Tonga lafatra ny sokitra nangatahiko. Misaotra anao indrindra.